प्रभु लाइफको ६० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति कित्तासम्म भर्न पाइन्छ ? |
प्रभु लाइफको ६० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुल्यो, कति कित्तासम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं २९ मंसिर २०७७ । प्रभु लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनीले मंसिर २९ गते आज (सोमवार)देखि आईपीओ विक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ विक्री खुला गरेको हो ।
सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्रीमा आउने ५४ लाख कित्तामा मात्र अन्य सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल कम्पनीमा संस्थापक तर्फको मात्र १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको छ ।
यस कम्पनीले आईपीओ विक्रीका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मंसिर ११ गते अनुमति पाएको हो । कम्पनीले गत असोज १४ गते उक्त आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । नयाँ बीमा कम्पनीको रुपमा २०७४ साल मंसिर २८ गतेदेखि यस कम्पनीले औपचारिक रुपमा कारोबार सुरु गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म यस कम्पनीले रू। ३ करोड ९ लाख २४ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
यो रकम गत वर्षको यस अवधिमा रू. १ करोड २२ लाख ९४ हजार थियो । नाफा बृद्धि गर्दै गएको यस कम्पनीले यस वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म रू। २५ करोड ९७ लाख ९१ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने रू. ६१ लाख ६८ हजार कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । हाल कम्पनीमा १ लाख २० हजार ४६९ बीमालेख कायम रहेको छ । यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्र कम्पनीले २२ हजार ५९४ बीमालेख कायम गरेको हो ।
यस अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू.२३ करोड ९१ लाख ७९ हजार रहेको छ भने जीवन बीमा कोषमा रू। १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख ८५ हजार रहेको छ ।